Matongerwo eNyika, 01 Chivabvu 2019
Chitatu 1 Chivabvu 2019
Chivabvu 01, 2019
Nyanzvi Dzozeya Mamiriro Akaita Zvinhu Munyaya dzeKuburitswa kweNhau
Mukuru weMedia Institute of Southern Africa-Zimbabwe, VaTabani Moyo, vanoti vatapi venhau vari kuramba vachimbunyikidzwa munyika zvisinei nekuti Zimbabwe yave nemutungamiri mutsva, VaEmmerson Mnangagwa, zvichitevera kubviswa kwakaitwa VaMugabe pachigaro nemauto muna 2017.
America Inoti Zimbabwe Haisi Kuzadzikisa Zvivimbiso zveKuvandudza Nyaya dzezveMatongerwo eNyika
Hurumende yeAmerica inoti Zimbabwe haina zvizhinji zvairi kuvandudza munyaya dzezvematongerwo enyika zvingapa kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende zvibviswe.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri muSouth Africa Zvinoti Hazvina Kucherechedza ZuvareVashandi
Apo pasi rose range richipemberera zuva ravashandi, mhuri yeZimbabwe inogara muSouth Africa inoti hapana chekupemberera zuva iri nokuti nyika haisati yasununguka zvizere munyaya dzezvehupfumi pamwe nezvematongerwo enyika.
Hurumende Yoronga Kutamisa Vakakanganiswa neCyclone Idai
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vasvika kwaMutare masikati pamberi pemusangano wavo nemadzishe nemasadunhu ekuChimanimani neChipinge nemusi weChina.
Kubvumbi 30, 2019
Nyaya yeKukwira kweMitengo Yokonzera Kusagadzikana Munyika
Nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu vhiki roga roga yave kukonzera kusagadzikana munyika hurumende ichipomera vanopokisa, masangano akazvimirira uye vemabhizimisi mhosva yekuda kuipidigura.
Kuoma kweZvinhu Munyika Kwotadzisa Vashandi Kucherechedza Zuva Ravo
Sangano revashandi iri richacherechedza zuva revashandi pasi rose kuburikidza nekuungana kunhandare yeDzivarasekwa muHarare.
Kubvumbi 29, 2019
VanaChiremba Voyambirwa Vanhu nezveMvura yemuHarare Inonzi Haina Kuchena
Nyanzvi munyaya dzehutano dziri kuyambira vagari vemuHarare kuti vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura vasati vaishandisa mudzimba sezvo mvura iri kuwanikwa muguta iri, ichikwanisa kuvhiringa hutanho hwavo.
Vagari vekuMasvingo Vochema neKudhura kweZvinhu
Vamwe vagari vekuMasvingo vari kuchema chema zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvekudya zvapa kuti vanonge svosve nemuromo.
Hurumende Inoti Pane Vari Kuronga Kupidigura VaMnangagwa
Gurukota rinoona nezvemukati menyika VaCain Mathema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo vachiti pane vari kuda kupidigura hurumende mukuburikidza nekuratidzira.
Vakaurayiwa muNguva yeGukurahundi Votanga Kuvigwa Patsva
Mapfupa evaviri ava, VaJustin Tshuma nemudzimai wavo, Muzvare Thembi Ngwenya, avo vaive vakaroorana, anonzi akafukurwa pedyo nenjanji yechitima, apo vakavigwa nevamwe vagari vanonzi vakamanikidzwa nemapurisa kupfuchira vaviri ava.
Matunhu Ose Gumi neMatatu eMDC Anodoma VaChamisa seMutungamiri weBato
Vamwe vateveri vebato reMDC vari kunyunyuta nehurongwa kwekuti vamwe vachatora zvigaro mubato iri vachaita zvekudomwa nemutungamiri webato, kwete kusarudzwa kukongiresi.
Kubvumbi 28, 2019
VaDoug Coltart Vopomerwa Mhosva yeKuda Kukonzera Mhirizhonga
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu VaDoug Coltart nhasi vapomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga zvichitevera musangano wavakaitwa musi weChishanu nanezuro unonzi nemapurisa waida kukonzera kusagadzikana munyika.
VaChamisa Votarisirwa Kutaura kwaMutare neSvondo
Musangano weZanu PF Unopera kuGoromonzi VaMnangagwa Vachishora Mapato Anopikisa
Caps United Yokwaturana ne FC Platinum Mumutambo weShasha
VaMnangagwa Vanovhura Musangano weZanu PF Vachishora Kuratidzira neKuramwa Mabasa Kuri Munyika
Chirongwa cheNational Convergence Platform Chinoparurwa muHarare